ယူရိုပွိုငျပှဲကရြှုံးမှုနဲ့ နိုငျငံအသငျးကစားသမားဘဝကို စီရျောနယျလျဒို လကျပွနှုတျဆကျရတော့မလား
ယူရိုလကျရှိခနျြပီယံ ပျေါတူဂီအသငျးဟာ ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့မှာ ဘယျလျဂြီယံကို (၁-ဝ)ဂိုးနဲ့ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီး စပိနျအသငျးလိုပဲ ပွိုငျပှဲနှဈကွိမျဆကျခနျြပီယံဖွဈခှငျ့ရရေးမြှျောလငျ့ခကျြက အဆုံးသတျသှားခဲ့ရပါပွီ။
ပျေါတူဂီအသငျးရဲ့ နာမညျကြျောကစားသမား စီရျောနယျလျဒိုဟာ ဘယျလျဂြီယံနဲ့ပှဲမှာသာ ဂိုးသှငျးနိုငျခဲ့ရငျ အီရနျဂန်ထဝငျတိုကျစဈမှူးအလီဒါယီကို ကြျောဖွတျပွီး
ဘောလုံးသမိုငျးတဈလြှောကျ နိုငျငံတကာသှငျးဂိုးအမြားဆုံးကစားသမားအဖွဈ စံခြိနျတငျနိုငျမှာဖွဈပမေယျ့ အဲဒီအခှငျ့အရေးကို လှဲခြျောခဲ့သလို
နိုငျငံအသငျးနဲ့အတူ ယူရိုနှဈကွိမျဆကျရယူဖို့ အိပျမကျကလညျး ပကျြပွယျသှားပွီဖွဈပါတယျ။
အသကျ(၃၆)နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈသူ စီရျောနယျလျဒိုဟာ ယူရို-၂၀၂၀ ပွိုငျပှဲမှာ စံခြိနျကောငျးတှရေယူနိုငျခဲ့ပွီး ယူရိုပွိုငျပှဲအကွိမျအမြားဆုံးကစားသူ (၅ကွိမျ)၊
ယူရိုပွိုငျပှဲသမိုငျးတဈလြှောကျ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးကစားသမား(၁၄ဂိုး)၊ ယူရိုပွိုငျပှဲ (၅)ကွိမျဆကျဂိုးသှငျးခဲ့သူ၊
ယူရိုပှဲစဉျတဈပှဲမှာ နှဈဂိုးသှငျးယူခဲ့တဲ့ အသကျအကွီးဆုံးကစားသမား၊ နိုငျငံတကာပွိုငျပှဲကွီးတဈခုမှာ ပျေါတူဂီအသငျးအတှကျ ဂိုးသှငျးနိုငျတဲ့ အသကျအကွီးဆုံးကစားသမား၊
ကမ်ဘာ့ဖလားနဲ့ယူရိုပွိုငျပှဲနှဈခုပေါငျး သှငျးဂိုးအမြားဆုံးဥရောပကစားသမား (၂၁ဂိုး)စတဲ့စံခြိနျတှေ အမြားကွီးရယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ဒီလို စံခြိနျကောငျးတှရေယူနိုငျခဲ့ပမေယျ့ အသငျးအတှကျ ယူရိုခနျြပီယံဆု ထပျပွီးမယူပေးနိုငျတာက သူ့အတှကျ စိတျပကျြစရာလို့ပွောရမှာပါ။
ဒါ့အပွငျ ယူရို-၂၀၂၀ ပွိုငျပှဲဟာ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ လကျရှေးစငျကစားသမားဘ၀ နောကျဆုံးနိုငျငံတကာပွိုငျပှဲဖွဈလာဖို့မြားနပေါပွီ။
လာမယျ့နှဈ၊ ဖဖေျောဝါရီလမှာ အသကျ(၃၇)နှဈပွညျ့မယျ့ စီရျောနယျလျဒိုဟာ ၂၀၂၂ ကမ်ဘာ့ဖလားခွစေဈပှဲတှမှော ပျေါတူဂီအသငျးအတှကျ ပါဝငျကစားဦးမယျ့အနအေထားရှိပမေယျ့
ကာတာနိုငျငံမှာ ကငျြးပမယျ့ ၂၀၂၂ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ ပါဝငျကစားနိုငျဦးမလားဆိုတာက မသခြောမရရောပါဘူး။
စီရျောနယျလျဒိုကတော့ အသကျ(၄၀)အထိဘောလုံးကစားမယျလို့ ကွှေးကွျောထားပွီး သူ့ရဲ့လကျရှိခန်ဓာကိုယျကွံ့ခိုငျမှုအနအေထားအရ ဘောလုံးဆကျကစားမယျဆိုရငျတောငျ
ကလပျနဲ့နိုငျငံနှဈသငျးစလုံးအတှကျ အငျပွညျ့အားပွညျ့ကစားနိုငျဖို့ မဖွဈနိုငျတော့ပါဘူး။
နောကျပွီး ပျေါတူဂီအသငျးမှာ လူငယျမြိုးဆကျသဈကစားသမားတှအေတှကျ နရောပေးရမယျ့အခြိနျလညျးရောကျလာပါပွီ။
အဲဒါကွောငျ့ စီရျောနယျလျဒိုဟာ ယူရိုပွိုငျပှဲကရြှုံးမှုနဲ့ လကျရှေးစငျကစားသမားဘဝကို လကျပွနှုတျဆကျရတော့မလားဆိုတာကတော့ . . .
ယူရိုပြိုင်ပွဲကျရှုံးမှုနဲ့ နိုင်ငံအသင်းကစားသမားဘဝကို စီရော်နယ်လ်ဒို လက်ပြနှုတ်ဆက်ရတော့မလား
ယူရိုလက်ရှိချန်ပီယံ ပေါ်တူဂီအသင်းဟာ ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်မှာ ဘယ်လ်ဂျီယံကို (၁-ဝ)ဂိုးနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး စပိန်အသင်းလိုပဲ ပြိုင်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဆက်ချန်ပီယံဖြစ်ခွင့်ရရေးမျှော်လင့်ချက်က အဆုံးသတ်သွားခဲ့ရပါပြီ။
ပေါ်တူဂီအသင်းရဲ့ နာမည်ကျော်ကစားသမား စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ပွဲမှာသာ ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ရင် အီရန်ဂန္ထဝင်တိုက်စစ်မှူးအလီဒါယီကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက် နိုင်ငံတကာသွင်းဂိုးအများဆုံးကစားသမားအဖြစ် စံချိန်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပေမယ့် အဲဒီအခွင့်အရေးကို လွဲချော်ခဲ့သလို နိုင်ငံအသင်းနဲ့အတူ ယူရိုနှစ်ကြိမ်ဆက်ရယူဖို့ အိပ်မက်ကလည်း ပျက်ပြယ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
အသက်(၃၆)နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သူ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ယူရို-၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲမှာ စံချိန်ကောင်းတွေရယူနိုင်ခဲ့ပြီး ယူရိုပြိုင်ပွဲအကြိမ်အများဆုံးကစားသူ (၅ကြိမ်)၊ ယူရိုပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက် သွင်းဂိုးအများဆုံးကစားသမား(၁၄ဂိုး)၊ ယူရိုပြိုင်ပွဲ (၅)ကြိမ်ဆက်ဂိုးသွင်းခဲ့သူ၊ ယူရိုပွဲစဉ်တစ်ပွဲမှာ နှစ်ဂိုးသွင်းယူခဲ့တဲ့ အသက်အကြီးဆုံးကစားသမား၊ နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုမှာ ပေါ်တူဂီအသင်းအတွက် ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ အသက်အကြီးဆုံးကစားသမား၊ ကမ္ဘာ့ဖလားနဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲနှစ်ခုပေါင်း သွင်းဂိုးအများဆုံးဥရောပကစားသမား (၂၁ဂိုး)စတဲ့စံချိန်တွေ အများကြီးရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို စံချိန်ကောင်းတွေရယူနိုင်ခဲ့ပေမယ့် အသင်းအတွက် ယူရိုချန်ပီယံဆု ထပ်ပြီးမယူပေးနိုင်တာက သူ့အတွက် စိတ်ပျက်စရာလို့ပြောရမှာပါ။ ဒါ့အပြင် ယူရို-၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲဟာ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ လက်ရွေးစင်ကစားသမားဘ၀ နောက်ဆုံးနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲဖြစ်လာဖို့များနေပါပြီ။ လာမယ့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ အသက်(၃၇)နှစ်ပြည့်မယ့် စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ၂၀၂၂ ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲတွေမှာ ပေါ်တူဂီအသင်းအတွက် ပါဝင်ကစားဦးမယ့်အနေအထားရှိပေမယ့် ကာတာနိုင်ငံမှာ ကျင်းပမယ့် ၂၀၂၂ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ပါဝင်ကစားနိုင်ဦးမလားဆိုတာက မသေချာမရေရာပါဘူး။
စီရော်နယ်လ်ဒိုကတော့ အသက်(၄၀)အထိဘောလုံးကစားမယ်လို့ ကြွေးကြော်ထားပြီး သူ့ရဲ့လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်မှုအနေအထားအရ ဘောလုံးဆက်ကစားမယ်ဆိုရင်တောင် ကလပ်နဲ့နိုင်ငံနှစ်သင်းစလုံးအတွက် အင်ပြည့်အားပြည့်ကစားနိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။
နောက်ပြီး ပေါ်တူဂီအသင်းမှာ လူငယ်မျိုးဆက်သစ်ကစားသမားတွေအတွက် နေရာပေးရမယ့်အချိန်လည်းရောက်လာပါပြီ။ အဲဒါကြောင့် စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ယူရိုပြိုင်ပွဲကျရှုံးမှုနဲ့ လက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝကို လက်ပြနှုတ်ဆက်ရတော့မလားဆိုတာကတော့ . . .
နှဈသငျးစလုံး အလှဲလှဲအခြျောခြျောကစားခဲ့ပွီး ခကျြအသငျး ကှာတားဖိုငျနယျတကျရောကျခှငျ့ရရှိ
ပွိုငျဘကျသူလြှို ကစားသမားတှအေလား ဝဖေနျပွဈတငျခံရတဲ့ ဖာနနျဒကျဈနဲ့ ဂြာအိုဖီးလဈ